Askareynta Carruurta & Haweenka. Shareecadu maxay ka qabtaa? | Radio Muqdisho
Askareynta Carruurta & Haweenka. Shareecadu maxay ka qabtaa?
Published on January 9, 2013 by Liibaan · 2 Comments · 2,687 views
Bar Tubta Toosan 07.01.2013
Shareecada Islaamku si weyn ayay u reebtay in la dagaal geliyo ama la dilo dumarka carruurta iyo dadka da’da ah, kuwa cibaadada u go’ay, socotada iyo dadka magaca dheer leh ee aan sinaba colaadaha ugu lug lahayn.
Dhaqankeenna suubbani, sidaas oo kale ayay ceeb ugu tahay in la dilo ama la baqdin geliyo dadkaas aan soo sheegnay.
Laakiin sanadihii dambe aad ayaa loo jebiyay amarradii diineed iyo dhaqankii faca weynaa ee aan lahayn. Haween ayaa la dilay, la kufsaday, Odayaal iyo carruurna waxaa kas iyo kama’ba loogu laayay dagaallo dhacay.
Laakiin gefafkii la galay oo dhan waxaa isku fuuqsaday burcadda Alshabaab oo carruurtii askareeyay, haweenkiina u adeegsaday in ay eheladooda isku qarxiyaan.
Damiir xumida Shabaab waxaa kaloo daliil u ah, waxay qiima tireen dhiigga haweenkii is qarxiyay oo ay iska fogeeyeen markii ay ku dan gaareen.
Qarixii Tiyaatarka ee Afartii April waxaa fulisay haweeney ay Shabaab bam ku soo xireen, Wasiirkii arrimaha gudaha Gudahana waxaa isku qarxisay gabar Shabaab lumiyeen.
Inta badan qaraxyadii dalka ka dhacay waxaa fulinayay dhallinyaro Alshabaab marin habaabiyeen.
Shareecada Islaamku maxay ka qabtaa dagaal gelinta carruurta iyo haweenka iyo dilka biri-mageydada,w aa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan, oo uu marti noogu yahay Sheikh Cali Sheikh Maxamuud Sheikh Cali Dheere).
lul says:	January 9, 2013 at 8:23 pm	walaalayaalow waaidin salamay,s.kadib ragiina somaliyeed yaa idin aaminayo ? waxaad tihiin kuwii dagaalka nagu haligay hadaan nahay haweenka somaliyeed ,kufsi,dhac iyo wax walbo bini,aadan u daran .waxaad tihiin niman inta garwada daystay quraanka kariimka meel uga dhacay waxna qorin waxna aqrin dhibaato u taagan burburiyey magac iyo sharafta ummadda somaliyeed ee dhaqaale doon ah si walba .Hadda waxaad ku qaraabataan magac diinta waxaana dooneysaan in aad dhulkii hooyo gacanta u galisaan keny iyo ethopiya marka sidaas soconmayso ee taa qalbiga galiya dumarkaan idiin talinayo taaogaada
Reply »	Xasan maxmed cabdi says:	January 19, 2013 at 2:32 pm	Al shabab hada muslimin ma lagu tilmami kara misa khawarijti xilig cusman binu cafan iyo cali binu abi dhalib ilahay ha ka rali ahade